स्कूलको बसमा जन्ती ! जिसस प्रमुखदेखि मेयर र अधिकृतको लर्को « purwanchal National Daily
स्कूलको बसमा जन्ती ! जिसस प्रमुखदेखि मेयर र अधिकृतको लर्को
[सुरेन्द्र भण्डारी/नरेन्द्र ढकाल]
बिर्तामोड , विद्यार्थी बोक्ने स्कूल बस जन्ती बोक्न प्रयोग भएको पाइएको छ । विद्यालयको पठक–पाठन नै अबरुद्ध गरेर साविक विराटनगर–१३ मा रहेको कोशी विद्या मन्दिरको नाममा रहेका दुई वटा बस र एउटा स्कूल भ्यानमा शुक्रवार जन्ती बोक्न प्रयोग भएको पाइएको हो ।
जन्ती बोक्न प्रयोग गरिएको स्कूल भ्यान
जन्ती बोक्न प्रयोग गरिएका स्कूल वस
विवाहमा आएको सरकारी गाडी
विद्यालयका सञ्चालक विश्वास पोख्रेलले वेहुलो बनेर स्कूल बसको दुरुपयोग गर्दै जन्ती लिएर झापाको विर्तामोडस्थित अतिथि सदनमा आएका थिए । एमाले नेतृ आद्र्रता रेग्मीसंग शुक्रबार पोख्रेलको विवाह भएको थियो । इलाम मंगलबारेकी रेग्मीसंग भएको विवाहमा सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्दै अधिकांश नगरपालिका प्रमुख, सरकारी कार्यालयका अधिकृत र जिल्ला समन्व्य समितिका संयोजक समेत सहभागी थिए ।
पोख्रेलले विवाहका लागि को १ क ११६६, ना ७ क ५७५८ नम्बरका बस र को १ च ६८८८ नम्बरको स्कूल भ्यान जन्ती बोक्न प्रयोग गरिएको थियो । पहेंलो रंगका सवारी साधन विद्यार्थी बोक्न प्रयोग गरिन्छ । तर, जन्ती लिएर आँउदा बेहुली पक्षका आफन्त नै आश्र्चयमा परे । स्कूल बसमा बेहुला विश्वास र बेहुली आद्र्रताको विवाहको फोटो सहितको ब्यानर टाँगिएको थियो । जसका कारण एउटा सवारीको नम्बर प्लेट नै छोपिएको थियो ।
अभिभाकको पैसामा सञ्चालकको रज्जाई
विद्यार्थीलाई स्कूलसम्म पु¥याउन ल्याउन र लान स्कूल वसको प्रयोग गरिएको हुन्छ । अभिभावककै शुल्कले ती सवारी साधन सञ्चालनमा आएका हुन्छन् । तर, विद्यालय सञ्चालकले नै विद्यालय वन्द गरेर स्कूल वसमा जन्ती बोक्न प्रयोग गरेका छन् ।
‘स्कूल वस भाडामा लाउन पाइँदैन’
जिल्ला शिक्षा कार्यालय मोरङका सूचना अधिकारी राजेन्द्र वुढाथोकीले स्कूल बस भाडामा लगाउन नपाइने बताएका छन् । उनले विद्यालयको नाममा रहेका पहेलो रंङका वस एक समय विद्यार्थी बोक्न र अर्काे समय भाडामा लाउन नपाइने बताएका छन् । मलामी बोक्न केही विद्यालयले स्कूल वस प्रयोग गरेपनि जन्ती बोक्न विद्यालय सञ्चालकले मनोमानी रुपमा प्रयोग गरेका हुनसक्छन् वुढाथोकीले भने ।
क्षेत्र निदाउँदा जिल्लाले समात्यो
नम्बर प्लेट नै छोपेर स्कूल बसमा जन्ती लिएर आँउदा समेत क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीले सुइको नै पाएन । सडक र सवारीको नियमन गर्न ट्राफिक प्रहरीको प्रदेश नम्बर–१ स्तरीय क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीमा छ । त्यही ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा ट्राफिकका एसपी बस्छन् । तर, उनकै आँखै अगाडिबाट स्कूल बसमा विवाहको ब्यानर टाँगेर विराटनगरबाट जन्ती सहित झापा आउँदा समेत ट्राफिक प्रहरीले थाहै पाएन । तर, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाले वेहुली लिएर फर्कदै गरेको जन्ती सहितको स्कूल बस नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गरेको छ ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको लक्ष्मीपूर चेक पोष्टमा खटिएको ट्राफिक प्रहरीको टोलीले जन्ती सहितको स्कूल वसलाई नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गरेको ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक राजेश राईले जानकारी दिए । उनले भने – ‘ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्दै नम्वर प्लेट नै नभएको स्कूल वसमा जन्ती बोकेर विराटनगर जाँदै गरेको पाइएपछि कारवाही गरिएको हो ।’
ट्राफिक प्रहरीले नम्वर प्लेट नभएको स्कूलवसलाई अस्थाइ नम्वर प्रिन्ट गर्न लगाएर टासेर मात्र छाडेको छ भने ती सवारीलाई जरिवाना समेत गरेको बताइएको छ ।
डा.केसीलाई काठमाडौं लगिँदै
इलाम, इलाममा नौं दिनदेखि अनशनरत् डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर भएपछि उहाँलाई उपचारको
इलाममा केसी र थापाको जुहारी
सुरेन्द्र भण्डारी /नरेन्द्र ढकाल इलाम, । फरक–फरक माग राखेर इलाम सदरमुकाममा दुई व्यक्तिले सत्याग्रह शुरु